ကိုဗစ်ရှေ့တန်း ရခိုင် ကို စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖြစ် သွားရောက်မယ့် သူနာပြု ဆရာမလေးရဲ့ နှုတ်ဆက်စာ – Let Pan Daily
နာမည်စာရင်းလေးတော့ ထွက်လာပါပြီ၊ အမေကတော့ ပြောပြောချင်း တိတ်ဆိတ် သွားခဲ့တာ၊ အမေ စိတ်မပူပါနဲ့နော် အဖေလဲစိတ်မပူပါနဲ့ဗျ
Volunteer၊ ဒီချိန်က နိုင်ငံတော် တွက် လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မို့ ကိုယ်တက်နိုင်သလောက် မိခင်နိုင်ငံကို ဖြည့်ဆည်းပေးတာပါ။ အတက်နိုင်ဆုံး ကိုယ့်ဘက် က save ဖြစ်အောင်လုပ်မယ် ဆံပင်ညှပ်မယ် ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေလဲ အကုန် saveဖြစ်အောင်လုပ်သွားမှာပါ။ မစိုးရိမ်ကြ ပါနဲ့နော် စာရင်းလေး မြင်တော့ အွန်လိုင်း ကနေ ဂုဏ်လဲယူတယ်ဝ မ်းလဲနည်းတယ် ဂရုစိုက်နော် လို့ပြောပေးတဲ့ အသဲတွေကိုလဲ အရမ်းချစ်တယ်
မမြင်နိုင်တဲ့ ရန်သူကို ကိုယ့်ဘက်က အရှုံးပေး လို့ မဖြစ်ဘူးလေ၊ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် လိုက်ချင်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေလဲ လိုက်ချင်တဲ့ စိတ် ရှိနေရုံနဲ့တင် အားရှိပါတယ် နော်။ နိုင်ငံတော်ကြီး လိုအပ်နေချိန် မှာ ကူညီခွင့်ရလို့လဲ ကြည်နူးမိတယ်
Every Time Every where I am ready. Don’t worry for me. Proud for me.
ကိုဗဈရှတေ့နျး ရခိုငျ ကို စတေနာ့ဝနျထမျး အဖွဈ သှားရောကျမယျ့ သူနာပွု ဆရာမလေး ရဲ့ နှုတျဆကျစာ
နာမညျစာရငျးလေးတော့ ထှကျလာပါပွီ၊ အမကေတော့ ပွောပွောခငျြး တိတျဆိတျ သှားခဲ့တာ၊ အမေ စိတျမပူပါနဲ့နျော အဖလေဲစိတျမပူပါနဲ့ဗြ
Volunteer၊ ဒီခြိနျက နိုငျငံတျော တှကျ လိုအပျနတေဲ့အခြိနျမို့ ကိုယျတကျနိုငျသလောကျ မိခငျနိုငျငံကို ဖွညျ့ဆညျးပေးတာပါ။ အတကျနိုငျဆုံး ကိုယျ့ဘကျ က save ဖွဈအောငျလုပျမယျ ဆံပငျညှပျမယျ ကနျြတဲ့အပိုငျးတှလေဲ အကုနျ saveဖွဈအောငျလုပျသှားမှာပါ။ မစိုးရိမျကွ ပါနဲ့နျော စာရငျးလေး မွငျတော့ အှနျလိုငျး ကနေ ဂုဏျလဲယူတယျဝ မျးလဲနညျးတယျ ဂရုစိုကျနျော လို့ပွောပေးတဲ့ အသဲတှကေိုလဲ အရမျးခဈြတယျ
မမွငျနိုငျတဲ့ ရနျသူကို ကိုယျ့ဘကျက အရှုံးပေး လို့ မဖွဈဘူးလေ၊ အကွောငျး အမြိုးမြိုးကွောငျ့ လိုကျခငျြပွီး စိတျမကောငျးဖွဈနတေဲ့သူတှလေဲ လိုကျခငျြတဲ့ စိတျ ရှိနရေုံနဲ့တငျ အားရှိပါတယျ နျော။ နိုငျငံတျောကွီး လိုအပျနခြေိနျ မှာ ကူညီခှငျ့ရလို့လဲ ကွညျနူးမိတယျ
(၁၇) ကြိမ်မြောက် သိန်း (၁၅၀၀၀) ကံထူးရှင် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ (ထူးလိုက်တဲ့ ကံ ဆုကြီး (၂) ထပ်ကွမ်း)
ကျောင်းဖွင့်ချိန် ရောက်ရင် ပြန်လာမယ်…….ဖားကန့် မြေပြိုမှုကြောင့် ကွယ်လွန်သွားသူ ရေမဆေးသမားလေး တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်ကျောင်းသား “မောင်လှိုင်မင်းဦး”
သားတို့ သမီးတို့ ဘယ်လိုကျောင်း တက် ရမှာလဲ ဟင်? တဲ့ စိတ် မကောင်းလိုက် တာဗျာ